Umkhiqizi we-AASraw nmn & nr powder hplc≥98% | I-AASraw
I-AASraw inikela ngamakhono amancane okukhiqiza ukuphendula masinyane ekufuneni kwamanani amancane nezidingo zokukhulisa (1 kuya ku-50 kg).
Izikhungo ze-AASraw zikulungele ukukhiqizwa kwamakhemikhali aphakathi kwamakhemikhali kanye nezithako ezisebenzayo zemithi (ama-API) ezivivinyweni zomtholampilo,
kanye nama-API athengiswa ngamavolumu amancane. Izitshalo ezincane zisebenza ngokuya ngemikhombandlela ye-GMP.
Indlela ye-AASraw modular yokwenza imishini ihambisane nezidingo ezithile inika amandla lezi zikhungo ukusingatha ukukhiqizwa okuncane kuya kokuphakathi.
Ukudluliswa kwezinqubo kanye nobuchwepheshe kanye nokudla kwe-scale-up okutshala izitshalo zethu ezinkulu.
Njengengxenye yezinsizakalo zokukhiqizwa kwebanga eligcwele levolumu nezinsizakalo zokukala, amandla amakhulu asebenzisekayo ahlinzekelwa ukukhiqizwa okufika kuma-100 amaningana amathani ngomkhiqizo ngamunye nangonyaka, isb. 100 m3 umthamo.
◆ I-Hydrogenation nezinye izimpendulo eziphezulu (kuze kube ku-80 ibha)
Chem I-chemistry enezinga eliphansi lokushisa (kuze kufike ku -80 ° C)
◆ Ukumisa (amathani angu-1 ngamatch ngamunye)
◆ Izithako ezisebenzayo zemithi (GMP)
◆ Iziphuzo zazihluzwa (kuze kube yizigaba ze-70)
Chemistry esezingeni eliphakeme (kufika ku-250 ° C)
◆ I-Medium-pressure flash chromatography amakhono we-20 esikalini sezinto zokuhlukanisa.
Imishini yokuhlukaniswa kwabantu abancane, abakha amakhilo kanye nabakhiqizi abakhulu.
◆ Izihlungi zokucindezela (amakamelo okulungisa nokulungisa, amakamelo ahlanzekile)
◆ Centrifuges (amakamelo ahlanzekile)
Amakamelo ama-3 ahlanzekile (Class100'000)
◆ Amakamelo okuhlunga azinikezele i-2
◆ Ukushisa imishini (GMP)
◆ Vumela umshini wokumisa umthamo
◆ I-Conus Double dryer (4.5m3, insimbi engagqwali)